Taorian'ny fanavaozana ny HomePod amin'ny 14.5 mpampiasa sasany dia manana olana amin'ny fidirana amin'ny Apple Music | Avy amin'ny mac aho
Taorian'ny fanavaozana ny HomePod amin'ny 14.5 mpampiasa sasany dia manana olana amin'ny fidirana amin'ny Apple Music
Ny herinandro lasa teo dia namoaka ny kinova farany an'ny iOS 14.5 sy iPad 14.5 i Apple izay mamela antsika ihany amin'ny farany sokafy ny iPhone amin'ny alàlan'ny Apple Watch eo amin'ny tananao (fiasa mety ho tonga volana maro lasa izay) ankoatry ny fampidirana rafitra vaovao manontany ny mpampiasa raha toa ka maniry ny hanara-maso ny angon-drakitra ireo rindranasa.
Miaraka amin'ity fanavaozana ity dia namoaka ny kinova 14.5 an'ny HomePod ihany koa i Apple, toa izany fanavaozana izany ihany tsy mandeha araka ny tokony ho izy satria manamafy ny mpampiasa sasany fa tsy afaka mampiasa ny baiko Hey Siri hangataka hira, playlist… ao amin'ny Apple Music.
Ny kinova 14.5 ho an'ny HomePod dia nifantoka tamin'ny fanamboarana bibikely isan-karazany, tsy nampiditra fampiasa vaovao. Alatsinainy lasa teo, Apple dia namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny iOS 14.5.1 miaraka amin'ny "fanamboarana bibikely sy fanatsarana ny fahombiazan'ny zava-bita" izay manamboatra ny olana mampiseho ny fanovana ny Tracking Transparency amin'ny safidy fandefasana volondavenona amin'ny firenena sasany.
@AppleSupport Inona no mitranga amin'ny #HomePod tsy afaka mahita mozika amin'ny #AppleMusic?
"Hey Siri, milalao Elvis Presley"
"Tsy nahita an'i Elvis Presley tao amin'ny Apple Music aho"
"Hey Siri, milalao ny Beatles"
"Tsy nahita ny Beatles tao amin'ny Apple Music aho"
- "Dance" ve no nolazainao? (@didYouSayDance) Enga anie 5, 2021
Miaraka amin'ity kinova ity dia namoaka ny kinova 14.5.1 an'ny rindrambaiko ho an'ny HomePod ihany koa i Apple, fanavaozana izany tsy voavaha koa ny olana. Ny mpampiasa sasany dia milaza fa amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny laoniny ny HomePod, Siri dia nahatakatra ny fangatahana famerenana amin'ny alàlan'ny Apple Music. Araka ny efa nanamarihako azy dia tsy dia miparitaka be io olana io, fa eo izy. Raha sendra fahasimbana amin'ny HomePod ianao dia toa ny hamerina azy amin'ny laoniny no safidy.
Misy olana ve amin'ny fiasa iray ao amin'ny Apple Music Service, sa tsy izany? Tsy mandeha efa ho 2 andro lasa izay tao amin'ny HomePod rehefa hoe "hey Siri ... mitendry mozika"
- cymmer (@cymmer) Enga anie 5, 2021
Ity olana ity misy fiantraikany amin'ny HomePod fotsiny io fa tsy ny HomePod mini. Nandritra ny herinandro lasa sy ny fiandohan'ity herinandro ity, ny sasany amin'ireo serivisy Apple toa ny iTunes sy Apple Music dia niaina tsy fahatomombanana, olana mety ho tompon'antoka tamin'ireny tsy fahombiazana ireny. Azo inoana koa fa nandritra ny fizotry ny fametrahana dia tsy vita tsara izany satria rehefa namerina ilay fitaovana dia mandeha indray izy io toy ny tamin'ny voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Taorian'ny fanavaozana ny HomePod amin'ny 14.5 mpampiasa sasany dia manana olana amin'ny fidirana amin'ny Apple Music
Ensaro dia hoy izy:
Afa-tsy ny lesoka 14.5.1 dia tsy miseho ho an'ny HomePod.
Valio amin'i Ensaro
Rodri dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amin'ny iPhone 12 pro max sy lalao kilalao nataoko
Valiny tamin'i Rodri
Apple Pay dia misy any Israel izao
Finch kintana Tom Hanks ho ao amin'ny Apple TV +